दुःखद खबरः कोचिङ सेन्टरमै भिषण आगलागी १९ बिद्यार्थीकाे मृत्यु! – भिडियो हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > दुःखद खबरः कोचिङ सेन्टरमै भिषण आगलागी १९ बिद्यार्थीकाे मृत्यु! – भिडियो हेर्नुस्
admin May 24, 2019 May 25, 2019 अन्तराष्ट्रिय, भिडियो	0
काठमाडौं । भारतको गुजरातस्थित एक कम्प्लेक्समा भएको भीषण आगलागीमा परी १९ जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागी विद्युत् सर्ट भएर हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । कोचिङ सेन्टर रहेको कम्प्लेक्समा भएको आगलागी भएपछि त्यहाँका विद्यार्थीहरु तल्लो तलामा झर्ने कोसिस गरेका थिए । घटनाको एक भिडियो भाइरल भएको छ ।
भिडियोमा विद्यार्थीहरु कम्प्लेक्सबाट हामफालेको देख्न सकिन्छ । धेरै विद्यार्थीको मृत्यु आगोले डढेर भए पनि केहीको मृत्यु भने विल्डिङबाट हामफाल्दा भएको भारतीय मिडियाले लेखेको छ । विल्डिङमा ४० जना विद्यार्थी थुनिएका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने भारतीय मिडियाले लेखेको छ । अहिले त्यहाँ उद्धारको प्रयास जारी छ ।
उम्लिरहेकाे तेलमा डुवेका बालक शिशिर माथि फेरि यस्तो बज्रपात, भिडियो हेरेर शेयर गरदिनुस्